ခရီးစဉ်အများစုကို မိမိအိမ်ရှိတဲ့ဘက်ဆီ “My Destination” နဲ့ ဦးတည်လိုက်ပါ | Grab MM
ခရီးစဉ်အများစုကို မိမိအိမ်ရှိတဲ့ဘက်ဆီ “My Destination” နဲ့ ဦးတည်လိုက်ပါ
Grab အနေနဲ့ ယာဉ်မောင်းတွေရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝကို မြှင့်တင်ပေးဖို့ အဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပြီးတော့ ယာဉ်မောင်းတွေ အလိုအပ်ဆုံး၊ အသင့်လျော်ဆုံး လိုအပ်ချက်တွေကို လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနေပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ ခရီးသည်နဲ့ သင်သွားလိုတဲ့ဦးတည်ရာ လမ်းကြောင်းတွေ ကိုက်ညီစေမယ့် My Destination ကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့ စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ သင့်အိမ်ပြန်ချိန်၊ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်သိမ်းချိန်ရောက်တဲ့ အထိတောင် သင့်ရဲ့ နောက်ဆုံး အလုပ်လေးတွေ လက်ခံနိုင်အောင် ကျွန်တော်တို့က အာမခံပေးနိုင်ပါပြီ။
My Destination ကို လွယ်ကူတဲ့ အဆင့် ၄ဆင့်နဲ့ ဖွင့်ထားလိုက်ပါ!
အဆင့် ၁: Grab Driver app ရဲ့ Menu ထဲက ‘My Destination’ ကိုနှိပ်ပါ။
အဆင့် ၂: သင်သွားလိုတဲ့ ခရီးစဉ်လိုကေးရှင်းကို ရွေးချယ်ပါ။
အဆင့် ၃: Grab Driver app ကနေ သင့်ကိုလမ်းတစ်လျှောက်မှာ ရှာပေးတဲ့ အလုပ်တွေနဲ့ အတူ မောင်းနှင်သွားနိုင်ပါပြီ။
အဆင့် ၄: တကယ်လို့ အလုပ်ခေါ်တာရပြီဆိုရင်၊ လက်ခံပြီးတော့ ခရီးစဉ်ကို ပြီးဆုံးအောင် သွားလိုက်ပါ!
*IMPORTANT: My Destination နဲ့ခရီးစဉ်တွေအတွက် Incentives တွေထည့်သွင်း ရေတွက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒီလုပ်ဆောင်ချက်က သင့်ကို ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲ?
သင့်နေရာနဲ့ နီးစပ်တဲ့ ခရီးသည်တွေကို ခရီးစဉ်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်တာကြောင့် သင့်ဝင်ငွေကို ပိုမို တိုးတက်လာစေခြင်း
ကားလွတ်နဲ့ အလုပ်သိမ်းပြီး၊ အိမ်ပြန်ရတဲ့ အချိန်တွေကို မစိုးရိမ်ရတော့ခြင်း
အလုပ်သိမ်းပြီး မိသားစုကို ပေးမယ့်အချိန်တစ်ခုကို သတ်မှတ်ထားနိုင်ခြင်း
My Destination ကို ဖွင့်ထားပြီးတဲ့အခါမှာ သင့်သွားရောက်မယ့် လမ်းခရီးအတွင်း အလုပ်ရှိမရှိ စစ်ထုတ်ပြီး ရှာဖွေပေးသွားမှာ ဖြစ်တာကြောင့် ခရီးစဉ်တစ်ခုရဖို့ အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခု စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
Multi-stop ခရီးစဉ်တွေ ကိုလည်း စစ်ထုတ်ပေးသွားမှာပါ
သင့်မှာ My Destination ကို တစ်ရက် နှစ်ကြိမ်အသုံးပြုခွင့်ရှိပါတယ်။
My Destination mode နဲ့ အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ် ခရီးစဉ်တစ်ခု ပြီးမြောက်မှသာလျှင် တစ်ကြိမ်အသုံးပြုသည်ဟုသတ်မှတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင်သွားရောက်လိုတဲ့ လမ်းတစ်လျှောက် ခရီးစဉ် အများအပြား လက်ခံ သွားရောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုရင်လည်း My Destination mode ကို တစ်ကြိမ်အသုံးပြုခြင်း ဟုသာ သတ်မှတ်ရေတွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။
တကယ်လို့ သင်သွားမယ့်လမ်း တစ်လျှောက် ခရီးစဉ်တစ်ခုမှ မရရှိဘူးဆိုရင်တော့ My Destination ကို အသုံးပြုခြင်းဟု သတ်မှတ်သွားမည် မဟုတ်ပါ။
သင့်စိတ်ကြိုက် နေရာများကို သတ်မှတ်နိုင်ခြင်း!
သင့်အနေနဲ့ အလွယ်တကူ ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက် သင်သွားလိုတဲ့ စိတ်ကြိုက်နေရာ ငါးခုအထိ သတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ နေရာတစ်ခုကို သတ်မှတ်ဖို့ ဘေးဘက်မှာရှိတဲ့ လတ်တလော နေရာတွေထဲကနေ ‘More’ icon ကိုနှိပ်ပြီး ငါးခုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
မေး : My Destination mode ကိုဖွင့်ထားပေမယ့် ခရီးစဉ်တစ်ခုရဖို့ ဘာကြောင့် အကြာကြီးစောင့်ရလဲ?
ဖြေ: ခရီးစဉ်တစ်ခုရဖို့ အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုတော့ စောင့်ဆိုင်းရနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင်သွားမယ့်လမ်းနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ခရီးစဉ်သာ ရနိုင်ပါတယ်။ သင့်လမ်းကြောင်းနဲ့ မကိုက်တဲ့ အလုပ်တွေကို စစ်ထုတ်လိုက်လို့ပါပဲ။ Back-to-back နဲ့ Multi-stop အလုပ်တွေအားလုံးကိုလည်း စစ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။
မေး : My Destination ကနေ ရတဲ့ ခရီးစဉ်တွေဟာ သာမန်ခရီးစဉ်တွေနဲ့ ဈေးနှုန်းအတူတူပဲလား?
ဖြေ: ဟုတ်ကဲ့။ My Destination ရဲ့ အလုပ်တွေဟာ သာမန်အလုပ်တွေနဲ့ ဈေးနှုန်းအတေူတူပါပဲ။ High-demand ရဲ့ ဈေးနှုန်းတွေဟာလည်း သာမန်အတိုင်း သတ်မှတ်ပေးသွားမှာပါ။
မေး : My Destination ခရီးစဉ်တွေအတွက် Incentive တွေရရှိမှာလား?
ဖြေ: မရပါဘူး။ My Destination ရဲ့ ခရီးစဉ်တွေမှာ အကြောင်းရေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Incentive တွေ ရရှိခံစားနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မေး : ခရီးစဉ်လက်မခံတာတွေ၊ Cancel လုပ်တာတွေက My Destination မှာ Acceptance Rate တွေ၊ Cancellation Rate တွေကို ထိခိုက်စေသလား?
ဖြေ: ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ခရီးစဉ်လက်မခံတာတွေ၊ Cancel လုပ်တာတွေက တခြားအလုပ်တွေလိုပဲ My Destination မှာ အပတ်စဉ် Acceptance Rate တွေ၊ Cancellation Rate တွေကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
မေး : My Destination ကို ဘယ်နှစ်ခါ အသုံးပြုလို့ရလဲ?
ဖြေ: သင့်အနေနဲ့ My Destination ကို တစ်ရက်နှစ်ကြိမ်အထိ အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ My Destination mode နဲ့ အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်အထိ ခရီးစဉ်တစ်ကြောင်း ပြီးဆုံးမှသာ တစ်ကြိမ်အသုံးပြုတယ်လို့ သတ်မှတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် ခရီးစဉ်အများအပြား လက်ခံရရှိခဲ့ရင်လည်း My Destination ကို တစ်ကြိမ်အသုံးပြုတယ်လို့ပဲ သတ်မှတ်မှာပါ။
မေး : ကျွန်တော် My Destination mode ကိုပြောင်းပြီး Booking တစ်ခုကို လက်ခံလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် Passenger က Booking ကို Cancel လုပ်သွားတယ်။ အဲ့လိုဖြစ်ရင်ရော My Destination ကို တစ်ကြိမ်အသုံးပြုလိုက်ပြီး ဖြစ်သွားလား?
ဖြေ: မဖြစ်သွားပါဘူး။ တကယ်လို့ သင့်ဆီမရောက်မီအထိ အလုပ်တစ်ခုမှ မရခဲ့၊ မပြီးခဲ့ဘူးဆိုရင် My Destination ကို တစ်ကြိမ်အသုံးပြုပြီးလို့ မသတ်မှတ်ပါဘူး။
မေး: ကျွန်တော် My Destination mode ကို လိုကေးရှင်းမှားပြီး ဝင်မိတယ်။ ဘယ်လိုပြန်ပြောင်းရမလဲ?
ဖြေ : သင့်အနေနဲ့ လိုကေးရှင်းအသစ်ကို ပြန်ထည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နေရာအဟောင်းနဲ့ ခရီးစဉ်တစ်ခုသွားလိုက်လို့ရှိရင် My Destination ကို တစ်ကြိမ်အသုံးပြုလိုက်ပြီလို့ သတ်မှတ်လိုက်မှာပါ။
မေး: ကျွန်တော့်ရဲ့ My Destination အရေအတွက်ကို ဘယ်အချိန်မှာ ပြန်သတ်မှတ်လဲ?
ဖြေ: နေ့စဉ် ညသန်းခေါင်ယံအချိန် (ည ၁၂နာရီတိတိ) မှာ သင့်ရဲ့ နေ့စဉ်အရေအတွကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ပါတယ်။
မေး: ကျွန်တော့်ရဲ့ My Destination Mode ကို (ဇန်နဝါရီလ ၃ရက်နေ့) ည ၁၁နာရီ ခွဲမှာဖွင့်ပြီး ခရီးစဉ်နှစ်ကြောင်း ဆွဲလိုက်တယ်။ (ဇန်နဝါရီလ ၄ရက်) မနက် ၁၂နာရီခွဲမှာ ပိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင် ဘယ်ရက်ထဲကို ဝင်သွားမလဲ?
ဖြေ: သင်ပထမအလုပ်ကို ဘယ်အချိန်မှာ လက်ခံလဲ? ဆိုတဲ့ပေါ် မူတည်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်က ပထမအလုပ်ကို သန်းခေါင်ယံမတိုင်ခင် လက်ခံလိုက်တယ်ဆိုရင် ၃ရက်နေ့ရဲ့ ရေတွက်တဲ့ အထဲ ပါဝင်သွားမှာ ဖြစ်ပြီး ပထမအလုပ်က သန်းခေါင်ယံပြီးမှ ဝင်လာတယ်ဆိုရင်တော့ ၄ရက်နေ့အတွက် ရေတွက်တဲ့အထဲ ပါသွားမှာပါ။
မေး : My Destination နဲ့ ခရီးစဉ်တွေကို My Job History ထဲမှာ ပြမှာလား?
ဖြေ: ပြမှာပါ။ My Destination ထဲက ခရီးစဉ်တွေဟာ သာမန်အလုပ်တွေလိုပဲ History ထဲဝင်သွားမှာပါ။
မေး : ကျွန်တော်အမြဲသွားနေတဲ့ နေရာတွေကို Shortcut အနေနဲ့ ထည့်သွင်းထားလို့ရလား
ဖြေ : လက်ရှိမှာ သင့်ရဲ့ နေရာအားလုံးကို Tag အနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားလို့ မရနိုင်ပေမယ့် သင်သွားနေကျနေရာ ၅ခုအထိ သတ်မှတ်ထားလို့ ရပါတယ်။